China Concrete Mixing Pump Truck Isticmaalay Wershada Samaynta Farsamaynta iyo soo saarayaasha |Wanda
Gaariga Bambada Isku-dhafka Labeenta ah ee La Adeegsaday Qaadashada Fargashiga
Waxaa jira noocyo badan oo baabuurta bamka ah, sida: xamuulka shubka isku dhafka ah, gawaadhida boomka, xamuulka bamka gacanta, kan daadadka biyaha qaada, iwm.;Baabuurtan matoorada ah waa kuwo aan ka soocnayn qayb aad muhiim u ah oo gudbinta ah:dilid giraantadhalista.
Thewax dilidwuxuu ka kooban yahay saddex qaybood: giraanta gudaha, giraanta dibadda, iyo curiyaha duuban.Waxay isku mar qaadi kartaa mid weynxoog axial, xoog shucaac ah iyo daqiiqad leexleexan gaar ah.Waa ujeedo guud oo baaxad leh oo leh waxqabad dhammaystiran.Siddooyinka duuban ee gudaha iyo dibadda waxay leeyihiin boolal awood sare leh, siday u kala horreeyaan waxay ku go'an yihiin giraangiraha leexsan ama shasi.
In habka design eewax dilidee bamka shubka, sida ku cad waayo-aragnimada iyo xisaabinta sannadihii la soo dhaafay, waxaan guud ahaan dooranwax lagu laayo miiska rotary, kaas oo qaadi kara culeys weyn oo axial ah iyo daqiiqad caaro.Gawaarida qallafsan ee leexsanguud ahaan waxa loo qaybiyaa laba nooc:Hal kubbad safanwax dilidiyoHal safiskutallaabrullaluistemadka wax lagu dilayo.
Xuzhou Wanda dhalista dilaagaayaa bixiyaywax lagu laayoshirkadaha soo saara bambooyinka ee gudaha iyo dibadda ee caanka ah, waxayna leedahay khibrad qani ah.Haddii aad u baahan tahaywax lagu laayobaabuurta bamka, fadlannala soo xiriir.
Hore: XZWD dilaaga ah ee AWP (madaxda shaqada hawada)
Xiga: Wiishka Baabuurka Xamuulka qaada ee La Isticmaalay
bamka xamuulka isticmaalka giraanta wax lagu dilo
Garaaca Garaaca Yaryar
Wax qabad khafiif ah
XZWD kubbadda safka keli ah ee duuban ee wax lagu dilayo...
XZWD kubbadda safka keli ah ee wax ku dhufashada leh